[Ukara] Wondershare MobileTrans maka Mac: Mac ekwentị Nyefee Ngwá Ọrụ
1 Pịa bufee ọdịnaya n'etiti iPhone & Android
Newly akwado iPhone 6s (Plus), Winphone 8 & 8.1 Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.2, iOS 9, na Android 6.0
Gbalịa Ọ Free Mac OS X 10.6.8 na mgbe e mesịrị Buy Ugbu a
Mac ekwentị nyefee: 1-Pịa ekwentị ekwentị nyefee maka Mac Olee otú Ọ na-arụ ọrụ
Mee na-akpụ akpụ gị ngwaọrụ ọhụrụ ihe dị mfe mgbanwe na nke a Mac ekwentị transfer ngwá ọrụ (Ofụri Esịt dakọtara na Android 6.0 Marshmallow, iOS 9). Ịnwere ike ịnyefe n'elu niile nke gị data - gụnyere kọntaktị, ozi ederede, oku na ndekọ, photos, music, videos na ngwa - na-adịghị ize ndụ ma ọ bụ ọnwụ nke àgwà.
Otu Click Cross Platform ekwentị Nyefee
Ma ị na-upgrading ntị, ịmafe a dị iche iche ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe na-ebu ngwaọrụ, ọdịnaya gị kwesịrị ịkwaga na gị. Na dị nnọọ 3 mfe nzọụkwụ, MobileTrans maka Mac ike ịnyefe niile nke gị ọdịnaya gị ngwaọrụ ọhụrụ.
Bugharịa niile dakọtara faịlụ n'etiti dị iche iche nke igwe na-ebu.
Adịghị nnọọ nyefee aha na nọmba; -nyefee ọrụ aha, adreesị ozi-e, ụlọ ọrụ aha, na ndị ọzọ!
Nkwado maka 3,000+ ekwentị mkpanaaka na dị iche iche Networks
Oku na ndekọ
WinPhone 8 / 8.1 iji Android
WinPhone 8 / 8.1 iji iOS
WinPhone 8 / 8.1 iji WinPhone
iTunes ndabere ka Winphone
iCloud ka Android
iCloud ka iOS
iCloud ka Winphone
+ - Mụbaa TO Lee zuru ndepụta nke dakọtara ekwentị mkpanaaka na
Gam akporo ngwaọrụ
Samsung Samsung S5, Samsung S4, Samsung S3, Samsung S2, Samsung Cheta 2, Samsung Cheta, Samsung S, Samsung Ace, Samsung Nexus. Ele ọzọ >>
HTC HTC One (M8), HTC One X, HTC Wildfire S A510E, HTC Ọchịchọ, HTC Ọchịchọ HD A9191, HTC Wildfire, HTC Ọchịchọ HD, HTC One V. View ọzọ >>
Motorola Motorola MB860, Motorola MB525, Motorola MB526, Motorola XT910, Motorola Droid RAZR, Motorola DROID3. Ele ọzọ >>
Google Google Nexus 5, Google Nexus 4, Google Nexus 7, Google Nexus S, Google Nexus 10, Google Nexus S 4G, Galaxy Nexus, Nexus One. Ele ọzọ >>
Sony Xperia Z2, Sony Ericsson LT18I, Sony Ericsson ST18I, Sony Ericsson LT26I, Sony Ericsson MT11I, Sony Ericsson E15I. Ele ọzọ >>
LG LG Nexus 5, LG G2, LG Nexus 4, LG P500, LG E400, LGP970, LG P509, LG VM670, ele ọzọ >>
Ndị ọzọ Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ ngwaọrụ >>
iPad iPad, iPad 2, The New iPad, iPad na Retina ngosi, iPad Obere, iPad ikuku, iPad Obere na Retina ngosi
iPod aka iPod aka 5, iPod aka 4, iPod aka
Ndabere ekwentị gị na Weghachi na 1 Pịa
Ndabere na ekwentị Mac & Weghachi obula
Ewepụrụ niile na-atụ egwu, i wee na-atụfu onye data na ekwentị gị. Na MobileTrans maka Mac, ị nwere ike ndabere kọntaktị, SMS, music, na ndị ọzọ si ekwentị Mac na 1 Pịa. Mgbe ahụ, weghachi si zọpụta ndabere faịlụ enweghị ihe ọ bụla hassle.
100% Nchekwa ndabere, Ọ dịghị Loss
Ihe niile ị na nkwado ndabere na mpaghara na-dị nnọọ ka mbụ otu na ekwentị gị. Ọ dịghị ihe ga-efu.
Wepụ Blackberry / OneDrive ndabere ka Android Ngwaọrụ / iDevice
Okporo mmiri gị ochie Blackberry ma ọ bụ Windows Phone, ma ha adịghị achọ ịhapụ ọ bụla n'azụ? Echegbula. Ngwá ọrụ a na-eme ka ọ ibu mfe wepụ backups mere site BlackBerry® Desktọpụ Suite ma ọ bụ OneDrive na transfer kọntaktị, SMS, wdg ka Android ekwentị ma ọ bụ iDevice.
Get iTunes Backups maka Android Ngwaọrụ / iDevice
Nke a mobile transfer n'ihi na Mac ngwá ọrụ na-enye gị ka ị na weghachite iTunes backups na nyefee SMS, kọntaktị, foto, wdg ka iDevice ma ọ bụ Android ekwentị.
Weghachite Data si iCloud ndabere ka Android
Ị nwere ike weghachite data si iCloud ndabere ka ọ bụla na-akwado Android ekwentị, transfer kọntaktị, ederede ozi, photos, kalenda, na ọzọ.
Ihichapu Your Old ekwentị / Tablet-adịgide adịgide
Ere ya ere, inye onyinye ma ọ bụ Recycling gị ochie gam akporo ngwaọrụ, iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka? Deletion ma ọ bụ ụlọ mmepụta ihe nrụpụta bụ nanị ezughị ka e meere gị onye data. Ụfọdụ mgbake ngwá ọrụ mfe ọkọkpọhi ha azụ. Echegbula maka ya? Ị na-adịghị na ya. Wondershare MobileTrans Maka Mac-eme ka ọ na-adịgide adịgide nhichapụ effortlessly. Ọ na-enyere ike iṅomi na-adịgide adịgide ihichapu niile ẹdude data na niile ehichapụ data nke ka mụ na ebe nchekwa ekwentị. Ọ dịghị ihe dị recoverable.
Mac ekwentị Nyefee: Nyefee ọdịnaya site iPhone ka Android
Mac ekwentị Nyefee: Detuo ọdịnaya site Android ka iPhone
Mac ekwentị Nyefee: Gbanwee ọdịnaya site n'otu Android ọzọ
Mac ekwentị Nyefee: Ndabere ekwentị data na kọmputa
Mac ekwentị Nyefee: Weghachi ekwentị site a zọpụta ndabere faịlụ
Mac ekwentị Nyefee: Ihichapu Ihe niile na gị Android na-adịgide adịgide
Nyocha ahịa anyị Na MobileTrans maka Mac - na ị ga-, Oke
Nov 05,2015 16:26 pm
Ichekwa Up bụ mba ndị ọzọ nsogbu
M a mac ọrụ na onye m na-eji Samsung Galaxy Cheta 3 fọrọ nke nta 2 afọ. Ma Kies ma ọ bụ smart mgba ọkụ nwere ike kwadoo m data. Agbalịrị m ụbọchị 2. M bụ ya na-emezughị; ruo mgbe m chọtara ...
Otú nyefee data si Blackberry ngwaọrụ.
Ga ekwentị m tọgharịa ọ bụrụ na m ego na "Doro Anya data tupu edegharị" nhọrọ?
Gịnị na-eme mgbe m ga-esi na ozi "Iji nyefee data ịga nke ọma, biko uncheck encrypt iPhone ndabere nhọrọ ke iTunes.".
Gịnị ngwaọrụ na-akwado?
Nyefee na SMS, Music, Video, foto na kọntaktị site na iPhone ka Samsung